Casa San Juan # 2 yonke indlu e Vieques + Car $
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElsie
Indawo entle edolophini yaseVieques. Enye yezona ndawo zibalaseleyo eVieques. Imizuzu nje eli-10 uhamba ukusuka kwizibuko eliphambili. Ecaleni kwevenkile yokubhaka yaseLa Viequense kunye nee-scooters zokurenta. Hamba umgama ukusuka elunxwemeni lweglasi yolwandle
, iindawo zokutyela, iimarike kunye nekhemesti. Amagumbi okulala ama-2 / igumbi lokuhlambela eli-1, ikhitshi elipheleleyo, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yesofa. Igumbi lokuqala-ibhedi yokumkanikazi ene / c / Igumbi lesibini elinebhedi egcweleyo kunye neebhedi ezimbini zamawele. I-WiFi, iNetflix, ifulethi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Iikhamera zoKhuseleko zeyure ezingama-24
Iikhamera zokhuseleko zeyure ezingama-24
4.72 · Izimvo eziyi-192
Ngenxa yokuba sihlala e-Isabel Segunda (edolophini yaseVieques) kwaye kwesinye sezitrato eziphambili unayo yonke into oyifunayo kumgama wokuhamba. Izibuko elingundoqo / isikhululo senqanawa singaphantsi kwemizuzu eli-10 yokuhamba. Ulwandle oluhle lweglasi yolwandle yimizuzu emi-5 yokuhamba, iPosi, iipizza, iivenkile zokutyela, ivenkile enkulu, iinkonzo zokuDiving iiNdevu eziMnyama, ikhemesti, ibhanki yasekhaya, ivenkile ye-ayisikrimu, iimarike, zonke zingaphakathi komgama wokuhamba ngokunjalo. Eyona ndawo yokubhaka iphelele isecaleni kwethu (ivula kude kube ngu-3pm). Kwakhona kwisakhiwo sethu esikhulu esijongene nesitrato kukho ivenkile yempahla kunye nesikhumbuzo apho unokufumana izinto ezahlukeneyo. Ngaba ufuna imassage? Ukuwela nje isitalato. Indawo yokutyela iMamma Mia Pizzeria ngaphesheya kwesitrato ibonelela ngomculo ophilayo ngeempelaveki ezithile (buza okanye ufowunele ulwazi oluthe vetshe). Izithuthi zikawonke wonke kunye neenkonzo zeeteksi nazo ziyafumaneka. Ngaba uyafuna ukurenta isithuthuthu okanye iATV? Hamba nje amanyathelo ambalwa kwaye uya kufumana ii-Scooters zokuRenta.
Umbuki zindwendwe ngu- Elsie
Sibonelela self check in naphuma ngokusebenzisa lockbox. Ndifumaneka 24hrs ngosuku ngefowuni okanye itekisi ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vieques